Uyini umlilo weSan Telmo? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe: I-Aero Hispano Blog
Ezikhathini zasendulo uma uhamba ngomkhumbi kaningi kwakulula kakhulu kuwe ukuthi ugcine uhlangabezana nokugcine kugcina ngokuthiwa yi Umlilo weSan Telmo, lowo mlilo obubonakala ungaze uvuthe futhi okukuvumele ukuthi uqhubeke nezifundo zakho ngaphandle kwezinkinga ezinkulu.
Kodwa, Kuyini ngempela futhi kwakhiwa kanjani?
Umlilo weSan Telmo ungachazwa ngokuthi ukukhanya okukhanyayo okukhumbuza izinhlansi ezigxuma zisuka ensimbi ngesikhathi sesiphepho esinamandla. Lezi zinhlansi, ngokungafani nemishudo yombani, azinayo inkomba ethile, futhi zingabonakala imizuzu embalwa ngemuva kokuvela kwazo. Ngakho-ke akuyona uhlobo lombani futhi akuyona umlilo (empeleni, yi-plasma). Yanikwa lelo gama ngoba iSan Telmo iyona iphethini labasolwandle, obavikelayo.
Imvelaphi yayo ingatholakala kugesi ongaguquguquki womkhathi, futhi kwenzeka ezinhlokweni zezinto ezinde, okungukuthi, kwizinsika, amaphiko ezindiza, ezigxotsheni ezikhanyayo, phakathi kwabanye. Lesi simo senzeka lapho isiphepho esinamandla sidale inkambu kagesi enjalo ukuthi ikwazi ukwenza umoya usebenze. Ionization yinto okuyinto Ikhiqizwa ngama-athomu noma ama-molecule akhokhiswa ngogesi ngenxa yokushoda noma okweqile kwama-electron maqondana ne-molecule engathathi hlangothi. Lapho umehluko phakathi kokunye uphakeme ngokwanele, kuvela izinhlansi zoMlilo weSan Telmo.
Yize kungabangeli ukulimala, icala liyaziwa lapho bekukhona khona abashonile. NgoMeyi 6, 1937, kwabulawa abantu abangama-36 e-zeppelin EHindenburg. Lokhu kungenxa yokuthi i-hydrogen eyayikade isetshenziselwa ukuwagcwalisa yayinengozi enkulu yokusha.
Kepha njengamanje, uma kufanele uthathe indiza noma isikebhe bese ubanjwa nguMlilo weSan Telmo ... ukuthula, futhi uyijabulele, ayikho ingozi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Umlilo weSan Telmo: uyini?